10 Goobaha Safarka ee Xilliga Ka-baxsan Adduunka oo dhan | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Goobaha Safarka ee Xilliga Ka-baxsan Adduunka oo dhan
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe
Barashada dadka maxalliga ah iyada oo aysan jirin dad badan oo dalxiisayaal ah oo garabkaaga eegaya oo ku duulaya maqaayadda yar ee quruxda badan, Goobahan Socdaalka Xilliga Ka-baxsan ee Adduunka oo dhan ayaa ugu fiican fasax aan la ilaawi karin.
1. Goobaha Socdaalka ee Xilliga Ka baxsan: Ireland Bishii Oktoobar
Lagu qurxiyey dahab, hawo qallafsan, quruxda dabiiciga ah ee Irish ee Buuraha Wicklow, waddo gaaban u jirta Dublin oo waxaad timaaddaa meel quduus ah oo qurux badan. halkan, dariiq kasta oo socod ah ayaa kuu horseeda biyo -dhacyo la yaab leh, aragtiyo hal abuur leh, iyo samada buluugga ah ama dooxada Glendalough iyo degsiimadii daanyeerka ee qarnigii 6aad.
Faa'iido dheeri ah oo ku aaddan booqashada Ireland xilliyada ka baxsan waa fursadda aad ugu raaxaysato pint Guinness baarka maxalliga ah, midig horteed dab furan.
2. Talyaaniga Bishii Abriil
Ku quusitaanka badda Mediterranean, gurashada truffles, iyo caleemo dayr oo qurux badan, Talyaanigu waa meesha ugu dambaysa ee loo safro xilliga fasaxa ka baxsan bisha Abriil. Guga ayaa ah waqtiga ugu fiican ee lagu booqdo Talyaaniga sida heerkulka, huurka, qiimaha, dadkuna way yaraadaan.
Qof walba wuxuu rabaa inuu ku nasto Xeebta Amalfi, ama ku dhex jira canabyada Tuscany. Si kastaba ha ahaatee, waa qaali oo camiran xagaaga, xilliga ugu sarreeya. Sidaas, bisha Abriil u safrida Talyaaniga xilliyada fasaxa ka baxsan waa waqtiga ugu wanaagsan ee la aadi karo.
3. Goobaha Socdaalka ee Xilliga Ka baxsan: Dooxada Loire ee Faransiiska Badhtamihii Sebtember
Dayrta ubaxa dahlia, hawo buur oo cusub, caleenta dayrta, iyo dabayl khafiif ah maalmaha diiran, waxaad ka heli doontaa Dooxada Loire ee xilli -ciyaareedkan riyo buuxda. Miyiga Faransiiska ee soo jiidashada leh waxaa lagu yaqaan khamri cad, waqtiga goosashada wuxuu bilaabmaa badhtamaha Sebtembar.
Sidaas, Waqtiga ugu wanaagsan ee loo safro Loire waa bisha Sebtember, dhammaadka xilli -sarre. Waxaad ka dhigi doontaa xafladda Chateau de Chaumont Garden, xafladda yaanyada ee Chateau de la Bourdaisiere, iyo Festivini oo leh xafladeeda weyn ee Fontevraud Abbey. Mushroom -ka oo ku jira godad qabow, ama socodka marka heerkulku hoos u dhaco, laakiin maalmuhu weli waa dheer yihiin oo leh iftiin badan – Dooxada Loire waa meel la yaab leh oo xilliga firaaqada ah la aado bisha Sebtembar.
4. Goobta Socdaalka Xiliga Ka baxsan ee Jarmalka: Munich Bishii Sebtembar-Oktoobar
In kasta oo magaca marin habaabinta ah, dabbaaldegga biirka weyn wuxuu bilaabmaa Sebtember. Oktoberfest waa sabab la yaab leh oo loogu safro Jarmalka, iyo magaaladii ay ka yimaadeen, Munich. Inta lagu jiro wakhtigan, waxaad ka heli doontaa magaalada oo buuq badan oo Munich waxay leedahay gariir aad u weyn.
Iyadoo tani ay ka dhigan tahay inaad u badan tahay inay ku hareereysan yihiin dalxiisayaal, inkastoo aysan ahayn xilli sare. Wali waa mudan tahay in loo safro Munich xilli-fasaxeedka bisha Sebtember, si fudud si aad ula kulanto sixirka Oktoberfest.
5. Goobta Socdaalka Xilliga Ka-baxsan ee Shiinaha: Shanghai Bishii Nofembar
Iyada oo ay ku nool yihiin dad 26 milyan oo qof, waxaad had iyo jeer isku arki doontaa dad badan oo ku sugan Shanghai. Si kastaba ha ahaatee, u safridda xilli-fasaxeedka Shanghai waxay ka dhigan tahay in dalxiisayaashu ay guryahoodii ka soo noqdeen fasaxa xagaaga, markaa waxaad ku dhex milmi doontaa dadka deegaanka.
Waxaa intaa dheer, cimilada Shanghai waxay u egtahay mid diiran oo qoyaan cirka isku shareeraysa, sidaa darteed sabab badan oo ah in la safro xilli-ka-baxsan oo la jeclaado cirka Shanghai bishii November. Oktoobar-Nofembar waa xilliga Shanghai marka qoyaanku jiro, hoyga, dadkuna way daadanayaan. Sidan ayaad wax badan uga faa'iidaysan doontaa magaalada xiisaha badan oo cajiibka ah.
6. Goobaha Safarka ee Xilliga Ka-baxsan Adduunka oo dhan: Andalusia Spain Bishii Sebtembar
Iyadoo fiesta iyo xaflad ku dhawaad ​​maalin kasta, gobolka Andalus ee quruxda badan oo xiisaha leh waa riyo bisha Sebtember. Laga soo bilaabo dabbaaldegga goosashada khamriga ilaa cuntada badda iyo qorraxda xeebta - dhammaadka Sebtember waa waqtiga ugu habboon ee la booqdo Andalusia.
Halka Ogosto ilaa horraanta Sebtember ay weli aad u diirran tahay, dabayaaqada Sebtembar waxaad heli kartaa fursad roob, ama maalmo qumman oo xeeb ah, laakiin ilaa xad ma neefsan kartid mana ku dhex wareegi kartid magaalooyinka quruxda badan ee Andalus. sigaar cabidda maalmo kulul. Sidaa darteed, Andalusia ayaa ah meesha ugu fiican ee xilliga fasaxa ah ee Spain dhammaadka Sebtember.
7. Algarve Portugal Bartamihii Sebtember
Algarve waa cajiib sanadka oo dhan, sidaa darteed ma jirto waqti xun oo la booqdo. Dabaasha iyo nasashada xeebaha quruxda badan ee Portugal, oo aad haysato xeebta Atlantikada oo aad naftaada ku daboosho, badhtamihii Sebtember waa waqtiga ugu habboon ee la booqan karo Algarve.
Halka xagaaga uu yahay kan ugu kulul, sidoo kale waa kan ugu dadka badan, iyo xilliga jiilaalka, waxaad kula kulmi doontaa dad badan oo dalxiisayaal ah meel ku dhow mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan “surfers” adduunka. Sidaa darteed, Algarve waa meel ku habboon bartamihii Sebtembar. Waxaad heli doontaa fursad naadir ah oo aad ku raaxaysato godadka cajiibka ah, qarar, iyo tuulooyinka kalluumeysiga xeebta ku teedsan.
8. Safarka Xilliga Ka-baxsan ee Vienna Bishii Sebtember
Cuntada Viennese Street, khamri, gin, ama cocktail kasta oo aad dooratay waa sababo la yaab leh oo aad ugu safri karto Vienna bisha Sebtember. Halka xagaagu ku dhow yahay inuu baxo, oo ay la socdaan dadkii badnaa ee dalxiisayaasha ahaa, laakiin Viennese -ku waxay ku soo noqdeen magaaladii iyo sidoo kale ciidaha waaweyn.
Sidaa darteed, Vienna waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 10 Goobaha safarka ee xilliyada ka baxsan Yurub. Waxaad kala dooran kartaa intaad ku dhex safrayso beeraha canabka ah si aad ugu dabbaaldegto mid ka mid ah carwooyinka badan iyo ciidaha Vienna kaliya bisha Sebtembar oo kaliya dadka deegaanka. Ma jirto hab ka wanaagsan oo lagu raaxaysan karo cunnada Austria, dhaqanka, iyo quruxda Vienna marka loo eego dhexgalka dadka deegaanka.
Wax yar ka hor inta aan muuqaalku isku beddelin midabada dayrta iyo meelaha ugu sarreeya ayaa la geliyaa dharkooda cadcad ee barafka leh, ah Swiss Alps waa sixir-xilli-ka-baxsan. Isla markiiba ka dib inta badan dalxiisayaashu waxay ku laabtaan guriga, Alps -ka Switzerland waxay soo celiyaan sixirkoodii nabdoonaa, meel loo sameeyo hawlaha bannaanka iyo jimicsiga.
Sidaa darteed, Alps-ka Swiss waa meel la yaab leh oo ah meel safar xilli-dhaaf ah bisha Sebtember. Cimiladu waa diiran tahay, cirka buluugga ah oo cad oo aad ku raaxaysan karto socodka, baaskiil, nasashada iyo sahaminta aragtida quruxda badan. Sidaas, xitaa waad fuuli kartaa mid ka mid ah buuraha ugu quruxda badan Yurub Jungfrau.
10. Goobaha Safarka ee Xilliga Ka-baxsan Adduunka oo dhan: Paris Bishii December
Lugeynta Champs-Alyeese, ama iyada oo loo marayo Beerta Tuileries ilaa Louvre iyada oo aan la joogin dalxiisayaal waa waayo -aragnimo aan caadi ahayn ee Paris. Xilliga fasaxa ee Paris ayaa xitaa ka sii jaceyl badan marka aad dhex mushaaxi karto magaalada ugu dalxiiska badan adduunka, oo aan dalxiisayaal koone kasta. Halka xagaagu bixiyo cimilada ugu fiican iyo maalmaha qorraxda, December waa hubaal inay ugu fiican tahay fasaxa Paris.
U safrida Paris xilliga firaaqada ee Disembar waa ballanqaadyo aragtiyo la yaab leh. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto dad badan Suuqyada Kirismaska.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino qorshaynta safarkaaga xilli-dhaafka ah ee aad ku tagto goobahan riyada leh ee adduunka oo dhan.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga “10 Goobaha Socdaalka Xilliga Ka-baxsan ee Dunida” bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Foff-season-travel-locations%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)